Warar - Madhalays ka dhigida baakadaha dabacsan
Waxyaabaha wax lagu duubo ee rogrogmi kara waxay tixraacayaan isticmaalka qalabka jilicsan sida filimada caagga ah ee caqabadda badan leh ama biraha birta ah iyo filimadooda isku dhafan si loo sameeyo jawaano ama qaabab kale oo weelal ah. Si aseptic ganacsi, cuntada baakadeysan oo lagu keydin karaa heerkulka qolka. Mabda'a howsha iyo habka farshaxanka waxay la mid yihiin daasadaha birta ah ee lagu keydiyo cuntada. Weelasha baakadaha ee caadiga ah waxaa ka mid ah koobabka caagga ah iyo dhalooyinka caagga ah. Boorsooyinka wax lagu karsado, sanduuqyada, iwm.
Sababtoo ah farqiga cadaadiska muhiimka ah ee alaabada baakadaha dabacsan ayaa si gaar ah u yar, cadaadiska ku jira weelka inta lagu jiro howsha nadiifinta ayaa aad u fududahay inuu qarxo ka dib marka heerkulku kaco. Astaamaha bacda wax lagu kariyo ayaa ah inay ka baqeyso kor u kaca oo aysan cadaadis saarin; iyo koobabka balaastikada ah iyo dhalooyinka labaduba waxay ka baqayaan kor u kaca iyo cadaadiska, sidaa darteed waa lagama maarmaan in la isticmaalo habka nadiifinta nadiifinta ee nadiifinta jeermiga. Nidaamkani wuxuu go'aaminayaa in heerkulka nadiifinta iyo cadaadiska madaafiicda ay u baahan yihiin in si gooni ah loo xakameeyo soo saarista baakadaha rogrogmi kara Qalabka nadiifinta, sida nooca biyaha oo buuxa (nooca qubeyska biyaha), nooca buufinta biyaha (buufinta sare, buufinta dhinaca, buufin buuxda), uumiga iyo iskudarsiga hawada nooca nadiifinta, guud ahaan wuxuu dejiyaa xaddidaadyo kala duwan oo ay PLC ku maamusho otomaatikada
Waa in la xoojiyaa in afarta cunsur ee birta ahi ay awood u yeelan karaan inay xakameyso nidaamka howsha (heerkulka hore, heerkulka jeermiska dhalmada, waqtiga, arrimaha muhiimka ah) sidoo kale waxaa lagu dabaqi karaa xakameynta jeermiska dhalmada ee cuntada baakadeysan ee dabacsan, iyo cadaadiska inta lagu jiro nadiifinta iyo howlaha qaboojinta si adag loo xakameeyo.
Shirkadaha qaar waxay u adeegsadaan nadiifinta uumiga si ay u nadiifiso baakadaha dabacsan. Si looga hortago in boorsada wax karinta aysan qarxin, si fudud hawo la isku cadaadiyay ku dhex rid dheriga nadiifinta uumiga si aad ugu riixdo cadaadiska dhabarka bacda baakadka. Tani waa dhaqan cilmiyaysan oo cilmiyaysan. Sababtoo ah nadiifinta uumiga waxaa lagu sameeyaa xaalado uumi oo saafi ah, haddii hawo ku jirto dheriga, bac hawadeed ayaa la samayn doonaa, cufnaanta hawadani waxay ku dhex safri doontaa dheriga jeermiska looga dhigaa meelo qabow ama baro qabow, taas oo ka dhigeysa heerkulka jeermiska aan sinnayn, taasoo dhalisay in jeermiska looga dhigo nadiifinta alaabada qaar. Haddii ay tahay inaad ku darto hawo cufan, waxaad u baahan tahay inaad ku qalabeysnaato taageere awood leh, oo awoodda taageerehan waxaa si taxaddar leh loogu qaabeeyey inay u oggolaato hawo cadaadis leh inay si qasab ah ugu dhex wareejiso taageere-awood sare leh isla markii uu dheriga soo galo. Hawada iyo qulqulka uumiga waa isku dhafan yihiin, Si loo hubiyo in heerkulka dheriga jeermiska la adkeeyay uu yahay mid isku mid ah, si loo hubiyo in waxtarka jeermiska la'aantu ay leedahay.